Cabdi Maxamuud Cumar oo markale la horgeynaya maxkamad ku taala Itoobiya. – warqaat.com Information About Somali New's Today
HomeWARARKA MAANTACabdi Maxamuud Cumar oo markale la horgeynaya maxkamad ku taala Itoobiya.
Cabdi Maxamuud Cumar oo markale la horgeynaya maxkamad ku taala Itoobiya.
October 29, 2018 Abdirahman Al-cadaala WARARKA MAANTA Comments Off on Cabdi Maxamuud Cumar oo markale la horgeynaya maxkamad ku taala Itoobiya.
Warqaat.Com:-Wararka naga soo gaaraya Magaalada Adis abab Ee Dalka itoobiya ayaa sheegaya in maanta lagu wado in la soo gabagabeeyo dhageysiga dacwada loo heysto Madaxweynihii hore Ee Gobolka Soomaalida Itoobiya Cabdi Maxamuud Cumar.
Afar jeer oo hore ayuu Cabdi Maxamuud Cumar ka soo muuqday Maxkamad waxaana loo heystaa Dacwado ah in uu galay Dambiyo ka dhan ah bini’aadinada.
Sida qorshaha uu yahay Maxkamadda Sare ee Itoobiya ayaa waxaa la horkeenayaa Cabdi Maxamuud Cumar, madaxweynihii hore ee Gobolka Soomaalida Itoobiya iyo afar mas’uul kale oo maamulkiisa horey uga mid ahaan jiray.
Cabdi Maxamuud Cumar ayaa laga xirey guri ku yaalay magaalada Addis Ababa 27-kii bishii hore, Waxaase maanta la soo gabagabeenayaa dhageysiga dacwadaha loo heysto.
651,197 total views, 5,513 views today
651,197 total views, 5,513 views today War ka soo baxay Hay’ada Nabadsugida iyo Sirdoonka Qarank ayaa waxaa lagu sheegay in Ciidamada Amniga ay Gacanta ku dhigeen Maxkaxdii ka dambeeyasay weerarkii dadka badan ku dhinteen ee lagu qaaday […]
651,071 total views, 5,516 views today
651,071 total views, 5,516 views today Wasaaradda Arrimaha Dastuurka ee Xukuumadda Federaalka ah ee Soomaaliya ayaa maanta qabatay munaasabad lagu daahfurayay Barnaamijka Carabiyaynta Dastuurka KMG ah oo ay ka soo qeybgaleen Wasiir Ku-Xigeenka Arrimaha Dastuurka iyo Safiirka […]
651,100 total views, 5,512 views today
651,100 total views, 5,512 views today Wareegto ka soo baxay Xafiiska Madaxweynaha Dowlad-goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam(Madoobe) ayaa Maanta oo Khamiis ah waxaa lagu Magacaabay Hanti dhowraha guud ee Jubbaland Wareegtada ayaa waxaa Hanti dhowrahaGuud ee Jubbaland […]
651,161 total views, 5,515 views today
651,161 total views, 5,515 views today Kulan socday in ka badan sideed saacadood ayaa waxa uu Turkiga ku dhexmaray Mas’uuliyiin uu horkacayay Wasiirka Gaadiidka iyo Duulista Soomaaliya Maaxamed Cabdullaahi Salaad(Omaar) iyo Mas’uuliyiinta Shirkadda Favori ee Maamusha Garoonka […]
651,222 total views, 5,516 views today
651,222 total views, 5,516 views today Taliye ku xigeenka Ciidamada Booliska Dowlad Goboleedka Galmudug Col, Cabdi Jaamac Cabdulle ayaa shaaciyay in kadib baaritaano ay sameeyeen ay heleen halkii laga soo abaabulay weerarkii lagu qaaday Xarun uu Gaalkacyo […]